Squid & Pig dia manome antsika protas Kawaii Star Wars indrindra. Famoronana an-tserasera
kawaii midika hoe rajako / mahafatifaty amin'ny teny Japoney ary tehezan-tendrombohitra iray izay misy dikany lehibe ilay malefaka sy mahafinaritra ny maso amin'ny endrika saiky sary. Izahay dia manana an'i Andrés sy Sonia ho mpaka sary roa izay mandrafitra ny studio famolavolana azy ireo, Squid & Pig, ho mpandray anjara fototra amin'ity lahatsoratra ity androany.
Amin'ny maha-protagonista ny zava-niainany manokana teo amin'ny hazavana sy ny maizina amin'ny hery dia entinay ireo andalana ireo iray amin'ireo tetikasany mahaliana indrindra, mahafatifaty sy tsy miankina, izay hitanao amin'ny mombamomba azy ao amin'ny Behance ihany koa. Fotoana mety tsara hihaonana amin'ny tarehin-tsarin'ny Star Wars lehibe: The Dawn of the Force amin'ny fomba fijery "kawaii".
Ny fomba, ny endrika tsara tarehy sy ny "mahafatifaty" dia ao anatin'ity andiana sary ity izay entanin'ny sarimihetsika Star Wars vaovao. Avy amin'i Behance, tranokala malaza ho an'ireo mpanakanto manana ny kalitao sy endrika rehetra, azonao atao ny mahita ny fizotran'ny famoronana litera sasany mandrafitra ity tantara kely navoaka ity.
Ny protagonista sasany manana endrika tena miavaka amin'ireo loha be ary fihetsika maneho fihetseham-po tokoa, farafaharatsiny amin'ireo mpilalao fototra roa izay saika manahaka ireo roa izay mitana ny toerana voalohany amin'ny sarimihetsika Disney mihitsy. Manoloana ny lafiny maizin'ny hery aseho amin'ireto sary ao Kylo Ren ireto ary miaraka amin'ny BB-8 mahafinaritra.
Squid & Pig dia studio misy sary miorina any Valencia izay manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana karazan-tsoratra, biby fiompy, sary masina ary sticker rehetra, ary eo amin'ireo mpanjifany misy marika toa an'i Mattel, Fox faha-20 taonjato, Los 40 Principales na Viber.
Un fomba fiasa voafaritra tsara ary izany dia amin'ny endriny rehetra ao anatin'io andian-dahatsoratra io ho an'ny Star Wars izay ahitantsika ireo mpihetsiketsika amin'ny endriny kawaii mety indrindra. Raha te hanaraka ny asan'izy ireo ianao dia afaka mahita azy samirery mombamomba an'i Behance o avy amin'ny tranokalanao ho akaiky ny tsirairay amin'ireo tetikasa vaovao natombok'izy ireo.
Manaraka ny fisian'ny hery, Eto amin'ny endri-tsoratra hafa amin'ny fomba hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Star Wars: ilay sary mahafinaritra an'i Squid & Pig, Star Wars: fanoharana The Force Awakens
Squid & Pig dia hoy izy:
Misaotra betsaka an-tanan-droa noho ny fampidirana! relika ianao! ?
Valiny amin'ny Squid & Pig